News - PUR စေးစက်၏အပေါ်ယံလွှာနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
PUR laminating စက်၏အပေါ်ယံလွှာနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏နိဒါန်း
1. လျှောက်ထားကော်ပမာဏတိုးမြှင့်။ ကော်ပမာဏသည်အလွန်သေးငယ်လွန်းပါကသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုကော်မကပ်ပါက၎င်းအလွှာနှစ်ခုပေါင်းစပ်။ ပေါင်းစည်းနေစဉ်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆဲလ်ပါသော anilox roller ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရော်ဘာ roller ၏ဖိအားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆရာဝန်ဓါးနှင့် anilox roller အကြားထိတွေ့မှုဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်အလွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကော်ပမာဏကိုတိုးစေနိုင်သည်။ အချို့သောပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်အလွှာများအတွက်မျက်နှာပြင်ကို fluffy ဖြစ်စေရန်မဖုံးအုပ်မီ Corona ကုသမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အလွှာ၏ကော်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကော်ပမာဏတိုးပွားစေသည်။
၂။ အလွန်မြင့်လွန်း။ အလွန်နိမ့်သောသင့်တော်သောခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်၏အစာရှောင်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဖုံးအုပ်ထားသောအလွှာသည်ခြောက်သွေ့သောအခါအပူချိန်အလွန်မြင့်မားပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောချက်ပြုတ်ပြီးနောက်၊ ကော်၏မျက်နှာပြင်အလွှာကိုကာဗွန်ညှိလိုက်ခြင်းဖြင့်ကော်၏နှောင်ကြိုးစွမ်းရည်ကိုပျက်စီးစေသည်။ ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်အလွန်နိမ့်ပါကထုတ်လုပ်သူ၏သတင်းအချက်အလက်ကကော်အားမပြည့်စုံစွာကုသနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကော်၏ viscosity ညံ့သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်း၏ပေါင်းစပ်အရည်အသွေးကိုပျက်စီးစေမည့်ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်များတွင်ပူဖောင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကော်ဒီဂျစ်တယ်ပရင်တာကို ရွေးချယ်၍ မြင့်မားသောအပူချိန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြန်လည်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော polyurethane ကော်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
3. သင့်လျော်စွာပေါင်းစပ်ဖိအားတိုးမြှင့်။ ပေါင်းစပ်သော roller ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အလွန်အကျွံပေါင်းစပ်သောဖိအားသို့မဟုတ်မညီမညာဖြစ်နေသောဖိအားများသည်ပေါင်းစပ်သောရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွန့်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအချည်းနှီးသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကိုပေါင်းစပ်ပြီးနောက်တွန့်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်အချောထုတ်ကုန်၏နှောင်ကြိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒြပ်ပေါင်း၏ဖိအားကိုသင့်လျော်စွာတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ဒြပ်ပေါင်း၏နှောင်ကြိုးစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။
ထို့အပြင်ပေါင်းစပ်ထားသောရုပ်ရှင်၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာနိုင်ငံခြားအမှုန့်များ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အခြားအပျက်အစီးများကိုကော်သို့မဟုတ်အလွှာ၏စုပေါင်းမျက်နှာပြင်သို့ကပ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ နိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အခါထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြproblemsနာများနှင့်မအောင်မြင်မှုများကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပါ။ အထက်ပါနည်းလမ်းများအားကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖယ်ရှားရန်။ ပြmultipleနာများသို့မဟုတ်မအောင်မြင်မှုများရှိပါကနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအချိန်တွင်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ကိရိယာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်၊ အဓိကပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အာရုံစိုက်ပြီးသေးငယ်သောပြproblemsနာများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြေရှင်းရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ပူအရည်ပျော်ကော်လျှောက်ထား, Ce လက်မှတ်ပါသောရေပူကော် Laminating စက်, Pur Hot Melt ကော် Nonwoven Laminating စက်, အလိုအလျောက်အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating Machine, Pur Hot အရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, အဝတ်အဘို့အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating စက်,